नेपाली पब्लिक बिहीबार, असार ५, २०७६ १९:५३
भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको मुलुकको सर्वनाश निश्चित हुन्छ। भ्रष्टाचार मात्र एउटा यस्तो घातक विष हो, जसले बढेबढे शक्तिसम्पन्न राष्ट्रलाई समेत धराशयी गराउन सक्छ। सम्पत्ति आर्जनको लालसा, शक्तिको भोक र धृतराष्ट्र प्रवृत्ति अर्थात् अनुचित सन्तान मोह भ्रष्टाचारका कारण हुन्। भ्रष्टाचारको कुनै विश्वव्यापी मान्यता हुँदैन। प्रचलित परम्परा, ऐन–कानून उल्लंघन गरी लाभ हासिल गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। अहिले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलाई नै भ्रष्टाचार भनेर बुझिने गरिएको छ। यद्यपि, यसको सीमा त्यतिमा मात्र सीमित छैन। सत्तामा पुग्न अपनाउने गैरकानूनी बाटो, शक्तिको दुरुपयोग, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले गरिने सबै काम भ्रष्टाचारकै रूप हुन्। भ्रष्टाचार त्यो धमिरा हो, जसले बाहिर सही सलामत देखिने दलिनलाई भित्रभित्रै सखाप पारिसकेको हुन्छ। जुन बेला धमिराले दलिन खाएको थाहा पाइन्छ, त्यसबेला घर जोगाउनै मुस्किल पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचारको चौतर्फी तर भित्रभित्रै भएको आक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि असम्भव हुनसक्छ। यद्यपि, भ्रष्टाचारको कुनै जात, धर्म र भौगोलिक सीमा हुँदैन। भ्रष्टाचारकै कारण शक्तिशाली राष्ट्रको पतन भएको इतिहास छ। ठूलाठूला युद्धमा आफ्ना विश्वासपात्र शत्रु पक्षको अनुचित प्रलोभनमा फसेर गुप्त रूपले कम गर्दा हार बेहोर्नुपरेको घटना बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ। भ्रष्टाचारले जनतालाई कंगाल बनाउँछ, राष्ट्रलाई कमजोर गराउँछ र उन्नति प्रगतिका तमाम माग अवरुद्ध गराउँछ। भ्रष्टाचार महात्म्यको चर्चा गर्न हजार जिब्रा भएको शेषनागलाई समेत मुस्किल पर्छ भने त्यसको असर र प्रभाव कति होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले प्रसंग नेपालको भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूकै हो। हाम्रा प्रधानमन्त्री ‘सदाचार’ छन्। भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतामा विश्वास राख्छन्। ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दैनन्, अरूलाई पनि गर्न दिँदैनन्।’ यो सत्यलाई उनको नामको एउटा कार्यक्रम अर्थात् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि प्रमाणित गरिदियो। हालै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुई खर्ब बीस अर्व रुपैयाँको चर्चाले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ स्थान पायो। पूर्वएमाले बाहुल्य क्षेत्रमा विनायोजना, विनाकार्यक्रम त्यो रकम खन्याइयो। भक्तपुरमा सावेल, पिक, कोदाला बोकाएर यतिकै उर्दीका भरमा मान्छे जम्मा गरियो र त्यो पैसाको खोलो बगाइयो। गुल्मीमा स्कूलको झार उखेल्न र पाल्पामा बाँदर लखेट्न प्रधानमन्त्री कोषको त्यति ठूलो रकम दुरुपयोग गरियो। यो भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो। जनताको रगतपसिनाबाट संकलन गरिएको र विदेशी ऋण–अनुदानबाट खडा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएको दुरुपयोगको लेखापरीक्षण गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले चाहँदा राज्यकोषको जसरी पनि दुरुपयोग गर्न सक्छन्, कानूनी व्यवस्था त्यस्तै छ? यी प्रश्नले नेपाली जनतालाई सताइरहेका छन्।
भ्रष्टाचारको कुनै जात, धर्म र भौगोलिक सीमा हुँदैन। भ्रष्टाचारकै कारण शक्तिशाली राष्ट्रको पतन भएको इतिहास छ। ठूलाठूला युद्धमा आफ्ना विश्वासपात्र शत्रु पक्षको अनुचित प्रलोभनमा फसेर गुप्त रूपले कम गर्दा हार बेहोर्नुपरेको घटना बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ। भ्रष्टाचारले जनतालाई कंगाल बनाउँछ, राष्ट्रलाई कमजोर गराउँछ र उन्नति प्रगतिका तमाम माग अवरुद्ध गराउँछ।
खड्ग ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। यद्यपि, यसअघिका सरकार चोखा थिए, दूधले नुहाएका थिए भन्ने होइन। राज्यकोषको दुरुपयोग, शक्तिको प्रभावमा परेर गरिने गैरकानूनी कार्य त्यसबेला पनि हुन्थ्यो तर त्यसको खुलेआम ब्रह्मलुट नै गर्ने गरी भएको थिएन। अहिले त प्रधानमन्त्री स्वयं लागेर भ्रष्टाचारीको रक्षा गर्छन्। भ्रष्टाचारीहरूको टिम नै खडा गरेर उसकै योजनामुताबिक चल्छन्। सरकार बलियो छ, दुई तिहाइको समर्थन छ भन्ने नाममा कसैको पनि कुरा सुन्दैनन्। जसले गर्दा विदेशी सञ्चारमाध्यमले समेत नेपालको सरकारलाई संसारकै भ्रष्ट भनेर प्रचार गर्न थालेका छन्। अमेरिकी प्रसारण संस्था सीएनएनले हालसालै ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार संसारकै सबभन्दा भ्रष्ट भनेर प्रचार गरेको घटनाले सारा नेपालीको शिर झुकाउने काम गरेको छ। वाइडबडी काण्डका भ्रष्टाचारी को हुन्? किन प्रधानमन्त्री त्यसलाई काँध थाप्छन्? फोरजी काण्ड, एनसेल कर प्रकरण, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकरण प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको दुरुपयोगकै तहका घटना हुन्। यिनको छानबिन कसले गर्छ? दोषीले कारबाही भोग्छन् कि भोग्दैनन्? कि यी घटनामा पनि चूडामणि प्रकरण दोहोरिन्छ? सरकारले अहिले डरलाग्दो अनियमितता बजेट निर्माणमा गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले नेपाल भनेको त्यही मात्र हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ। त्यसपछि पुष्पकमल दाहालको चुनाव क्षेत्र, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरूका चुनाव क्षेत्रमा बजेट सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित छ। बाँकी कुनै पहँुच नभएका, विपक्षले जितेका चुनाव क्षेत्रमा बजेट लगभग शून्य भएको छ। कुनै योजना परेका छैनन्। के यो भ्रष्टाचारका अर्को डरलाग्दो रूप होइन? यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटीमा राख्न सकिएला तर भ्रष्टाचार अवश्य नै हो। भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल दिनदिनै उकालो चढ्दै छ। मन्त्री हुनु भनेको रातारात अर्बपति हुनु हो भन्ने मान्यताले घर गरेको छ। मन्त्रीका श्रीमती र नातागोता कानून नाघेर सम्पत्ति सोहर्न व्यस्त छन्। तर, तिनलाई कानून लाग्दैन। अख्तियारमा सूर्यनाथ उपाध्यायजस्ता भ्रष्ट, नालायक कार्यकर्तालाई भर्ती गर्छन् र सारा अपराध छुपाएर शानले जिउँछन्। अहिले कम्युनिष्ट भनिने प्रचण्ड बहुमतको सरकारको विशेषता यही भएको छ। हिजो राजाको सम्पत्तिको चर्चा चल्थ्यो। पञ्चायत कालमा हामी गरिबी अवस्थाको चित्रण गर्न राजालाई विम्बका रूपमा प्रयोग गथ्र्यौं र ‘गरिब देशका धनी राजा’ भन्थ्यौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको लाख प्लसको जुत्ता, दिनमा ६० हजार रुपैयाँको पानीको कथाले नेपालीको जीवन स्तरलाई गिज्याउँदैन? खाडी मुलुकको ५० डिग्रीको गर्मीमा भेडा चराउने गरिब नेपालीको खुनको कति प्रतिशत अंश त्यसमा छ, त्यसको ख्याल राख्नु पर्दैन।
पञ्चायत कालमा हामी गरिबी अवस्थाको चित्रण गर्न राजालाई विम्बका रूपमा प्रयोग गथ्र्यौं र ‘गरिब देशका धनी राजा’ भन्थ्यौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको लाख प्लसको जुत्ता, दिनमा ६० हजार रुपैयाँको पानीको कथाले नेपालीको जीवन स्तरलाई गिज्याउँदैन? खाडी मुलुकको ५० डिग्रीको गर्मीमा भेडा चराउने गरिब नेपालीको खुनको कति प्रतिशत अंश त्यसमा छ, त्यसको ख्याल राख्नु पर्दैन।
अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्था छ। साउनदेखि अर्को आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ। भएको बजेट सिध्याउन जथाभावी गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि जीवित छ। रातारात पिच गर्ने, कागज बनाएर बजेट दुरुपयोग गर्ने, रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने काम धमाधम भइरहेका छन्। मुलुकको एक चौथाइ बजेट यसरी काम नै नगरी असार महिनामा मात्र खर्च हुन्छ। भ्रष्टाचारको त्यो पराकाष्ठा हो। सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने, पानीको पाइप जोड्ने, उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम निकासा गर्ने तर काम नगर्ने परम्परा धेरै पुरानो हो। यो परम्परा झन् मौलाउँदै जाँदै छ। यसले नेपालको विकासलाई झन् पछि धकेल्दै छ। वर्षभरि कुनै काम नगर्ने र असार महिनामा काम गरेजस्तै गरेर सारा बजेट उडाउने परम्पराप्रति कठोर बन्न सकिएन भने विकासका नाराको चीरहरण हुनेबाहेक अरू उपलब्धि हात लाग्दैन। हुन त भ्रष्टाचारीले कागजपत्रमै भ्रष्टाचार देखिने गरी अनियमितता गरेको हुँदैन। दसी–प्रमाण राखेर कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन। कुनै योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा अलिकति तलमाथि गर्नासाथ अर्बको रकम फरक पर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने त्यो पनि एउटा तरिका हो। कर्मचारीले कमाउ स्थानमा सरुवाका लागि करोेडौँ खर्च गर्ने, मन्त्रीले कमाउन पाइने मन्त्रालय रोज्ने प्रथाले हाम्रो समाजको भ्रष्ट प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। घरपरिवारदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्यविना न त न्याय सम्भव छ न मुलुकले प्रगतिको गति नै समात्न सक्छ। संस्थागत भ्रष्टाचारको अभ्यास गरेर आएको एमाले र लुटको साम्राज्य खडा गरेर दुनियाँलाई त्रसित गराएको माओवादीले अहिले शासनको बागडोर हातमा लिएका छन्। तिनले व्यक्तिगत रूपले आर्जन गरेर कार्यकर्ता पाल्ने र चुनाव खर्चको जोगाड गर्ने कांग्रेस नेतालाई माथ गरिदिएका छन्। लुटतन्त्रले पराकाष्ठा छोएको कुरा आज बच्चाबच्चालाई थाहा छ। यो तथ्य कलाकार, गायक, राजनीतिक कार्यकर्ता, पेशाकर्मी, कर्मचारी कसैमा पनि छिपेको छैन। त्यसैले त्यसको विरोधमा गाउने कलाकार रातारात लोकप्रिय हुन्छन्। युटुबमा भाइरल हुन्छन्। भ्रष्टाचारलाई तह लाउँछु भनेकै भरमा एकजना सन्की मेयर हालै एकाएक लोकप्रिय भए किन? किन कि अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध सारा जनता वाक्क भइसकेका छन्। उनीहरू त्यसबाट मुक्ति खोजिरहेका छन्। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मनमोहक नारा लगाएर सत्तारोहण गरेको ओली सरकारलाई अहिले त्यही नारा घाँडो भएको छ। यत्रतत्र, सर्वत्र भ्रष्टाचार भएपछि र भ्रष्टाचारलाई नै जीवन दर्शन ठानेपछि त्यो नारा उसका लागि तातो पिँडालु बनेको छ। निल्नु न ओकाल्नु स्थितिमा रहेको त्यो नाराले पनि अब उसको लाज ढाक्न सक्ने स्थिति छैन। कतिसम्म भने अहिले ओली सरकारलाई उनकै पार्टी नेता र विश्वस्त व्यक्तिले समेत काँध थाप्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसको कारण सरकारको नालायकी, निकम्मापन र भ्रष्ट चरित्र नै हो।
हुन त भ्रष्टाचारीले कागजपत्रमै भ्रष्टाचार देखिने गरी अनियमितता गरेको हुँदैन। दसी–प्रमाण राखेर कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन। कुनै योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा अलिकति तलमाथि गर्नासाथ अर्बको रकम फरक पर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने त्यो पनि एउटा तरिका हो। कर्मचारीले कमाउ स्थानमा सरुवाका लागि करोेडौँ खर्च गर्ने, मन्त्रीले कमाउन पाइने मन्त्रालय रोज्ने प्रथाले हाम्रो समाजको भ्रष्ट प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ।
आफू निर्विकल्प भएकाले जे गरे पनि हुने, बाह्र हातको टाँगोले पनि नछुने भ्रममा रहेको वर्तमान सरकारलाई साइजमा ल्याउन नसकिए मुलुक बर्वाद हुनसक्छ। अहिले चलेका भ्रष्टाचारविरोधी अभियान तुलनात्मक रूपले प्रभावकारी हुन नसक्नु, निहित स्वार्थवस अभियान चलाइएको सन्देश जानु, राजनीतिक चेतना र जागरण आउनुपर्ने युवा पुस्तामा यसको एकमात्र कारण राजनीति हो भनेर बुझ्नु नै अहिले दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ। अब दल, दलभित्रका गुट–उपगुटहरूले निधार खुम्च्याउनुपर्ने बेला भयो। भ्रष्टाचारलाई हामीले हाम्रो जीवनशैली बनाउने कि यसलाई निर्मूल पार्न मैदानमा आउने? सम्पत्ति कमाएपछि ठूलो मान्छे ठान्ने, अनुचित र गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिका आधारमा शानको जीवन जिउनेप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ। कसले के भनेको छ भन्ने आधारमा होइन, के गरेको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा बसाल्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी भ्रष्टाचारीको उपचार नखोजी मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्दैन। अतः हामीले अनुरोध गर्नु परेको छ, आग्रह गर्नु परेको छ– हामीलाई पराधीन गराउने, जीवनहीन बनाउने भ्रष्टाचारविरुद्ध डटेर मुकाबला गरौँ। भ्रष्टाचारीलाई तह लगाऊँ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ५, २०७६ १९:५३